एक अर्काबाट दम्पतीहरु के चाहन्छन् ? | सुदुरपश्चिम खबर
एक अर्काबाट दम्पतीहरु के चाहन्छन् ?
प्राकृतिक रूपमा एक अर्काबाट अलग भए पनि पुरुष र महिलासँगसँगै जीवन बिताउने सारथिहरु हुन् । महिला र पुरुषबाट नै परिवार र सम्बन्ध कायम हुन्छ । तर तिनीहरूको चाहनाहरू फरक हुन्छन् । एक सफल सम्बन्धको लागि दुवैलाई उनीहरूको पार्टनरले उनीहरूबाट के चाहन्छ भनेर जान्नु आवश्यक हुन्छ । दम्पतीहरु एक अर्काबाट के चाहन्छन् ?
पुरुष– यस्तो होस् जीवनसाथी
आत्मनिर्भर बनून : आजका शिक्षित र आत्मनिर्भर युवाहरू आफ्नी श्रीमतीलाई पनि आत्मनिर्भर बन्न र हरेक मुद्दामा उसको आफ्नै धारणा होस् भन्ने चाहन्छन् । केटाहरु श्रीमानलाई अगाडि बढ्न प्रेरणा दिने र संसार केवल उनका पतिमा मात्र सीमित छैन भन्ने धारणा राख्न चाहन्छन् । प्रत्येक घण्टामा कल गरेर ’तपाईं कहाँ हुनुहुन्छ, कहिले आउँदै हुनुहुन्छ’ भनेर सोध्नुको सट्टा आफू पनि केही काममा व्यस्त हुने महिला केटा मान्छेको रोजाइमा पर्ने गर्छन् ।
भावनात्मक रूपमा स्थिर रहून् ः पुरुषहरू आफ्नी श्रीमतीलाई भावनात्मक रूपमा स्थिर भएको देख्न चाहन्छन् । आँसु बहाउनु र पार्टनरलाई दोष दिनुको सट्टा आफ्ना भावनाहरू कसरी नियन्त्रण गर्ने र सम्बन्धलाई राम्रोसँग अघि बढाउने भन्ने कुरामा उनीहरु बढी संवेदनशील हुन्छन् । श्रीमतीले आफ्नो बारेमा केही कुरा मनपर्दैन भने सो समयमा चुपचाप बसून् र पछि शान्तिपूर्वक आफ्नो भावना व्यक्त गरून् भन्ने पुरुषहरुको मनसाय हुन्छ ।
प्रक्रिया र शिष्टाचार जानेको व्यक्ति हुन् : आजका आधुनिक पुरुषहरू सरल देखिने र धेरै सोझी श्रीमतीहरु चाहँदैनन् । केटाहरु चाहन्छ कि श्रीमतीले फेसन, सौन्दर्य र शिष्टाचारको राम्रो ज्ञान भएकी होस् । कुन अवसरमा कस्तो पोसाक लगाउने, कोसँग कस्तो कुरा गर्ने जस्ता कुरा जानेकी श्रीमती होस् भन्ने चाहन्छन् ।
बिन्दास–सक्रिय : बिन्डास र सक्रिय महिलाहरू पुरुषहरूले बढी मनपराउँछन् । महिलाहरूको आकर्षक, चञ्चल र हास्यास्पद टोनले तिनीहरूको दिनको थकान र तनाव हटाउँछ ।
पहल गर्ने वालीः ती दिनहरू अहिले छैनन् कि केवल पतिले निर्णय गर्ने र पत्नीले त्यसलाई मान्ने गरून् । आजका आधुनिक युवाको सोच र छनौट धेरै परिवर्तन भएको छ । उनीहरू यस्तो जीवनसाथी चाहन्छन् जसले आर्थिक मामलादेखि प्रेमसम्मको हरेक कोणमा उसलाई माया र साथ दिऊन् । त्यसैले पुरुषहरुले हिजोआज पहिलेको तुलनामा फरक खाले मान्छे मनपराउने गर्छन् ।
महिलाहरुको सोचाइमा यस्ता हुन्छन् श्रीमान्
सोच्ने क्षमता राम्रो होस् : महिलाहरू आफ्नो पति÷पत्नी जीवन्त र हँसिलो मुख भएको होस् भन्ने चाहन्छन् । हँसिलो श्रीमान् भयो भने सधै्रभरि रमाइलोमा नै जीवन बित्ने गर्छ । आजको तनावपूर्ण जीवनमा, यदि त्यस्तो साझेदार पाइन्छ भने जीवन खुसी हुन्छ।
आफूलाई बुझ्ने खालको होस् : अक्सर महिलाहरूको एउटै गुनासो हुन्छ, ’उनीहरूले मलाई बुझ्दैनन्।’ आजका महिलाहरू आफ्नो श्रीमान् आफूलाई बुझ्ने खालको होस् भन्ने चाहन्छन् । जसले उनीहरूको भावना, कामहरू, उनीहरूको समस्या आदि बुझ्ने खालका हुन् । आजको व्यस्त जीवनमा धेरै जोडीहरू एक अर्कासँग समय बिताउने मौका पाउँदैनन् । यस्तो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो जीवनसाथीको आवश्यकता बुझ्दैनन् । यदि तपाईं आफ्नो जीवनसाथीलाई खुशी देख्न चाहनुहुन्छ भने, एकले अर्कालाई बुझ्नुपर्छ ।
सुरक्षित महसुस गराउन सक्ने : महिलाहरू सधै आफूलाई सुरक्षित महसुस गराउन सक्ने जीवनसाथी चाहन्छन् । जससँग उनीहरू भावनात्मक मात्र होइन, आर्थिक रूपमा पनि सुरक्षित महसुस गर्छन् । केवल प्रेमको सहायताले मात्रै पूर्ण जीवन बित्दैन, यो कुरा आजका महिलाहरूलाई राम्ररी थाहा छ । त्यसैले उनीहरु त्यस्तो साथी चाहन्छन् जसले उनीहरूलाई मात्र प्रेम गर्दैन शारीरिक र मानसिक रूपमा पनि सुरक्षित महसुस गराउन सक्छन् ।
इमानदारिता : इमान्दारी प्रत्येक सम्बन्धका लागि धेरै महत्त्वपूर्ण छ, महिलाले यसलाई सबैभन्दा बढी महत्व दिन्छन् । उनीहरु आफ्नो साथीले सम्पूर्ण इमान्दारीको साथ सम्बन्ध कायम राख्न चाहन्छ । तपाईंको जीवनको हरेक राम्रो र नराम्रो अनुभव उनीहरूसँग साझेदारी गर्नुहोस् । तिनीहरूको सम्बन्ध पूर्ण पारदर्शी हुनुपर्छ । विज्ञहरू पनि विश्वास गर्छन् कि सफल विवाहित जीवनको लागि पुरुषहरू उनीहरूको सम्बन्धको बारेमा इमानदार हुनुपर्छ । अनलाइनखबर बाट सभार